Wararka Maanta: Khamiis, July 19, 2012-Haweenka kulan ku yeeshay Muqdisho oo Dowladda iyo Odayaasha ugu baaqay inay Tixgeliyaan Saamiga Haweenka
Haweenkan ayaa waxay soo dhaweeyeen horumarka laga gaaray geedi socodka looga baxayo xilliga KMG ah, iyagoo ku boorriyay madaxda dowladda in muddada yar ee u harsan ay ku dhameystiraan howlaha horyaalla.
Kulanka haweenka ayaa waxaa kasoo baxay afar qodob oo kala ahaa:
1. Waxaan u soo jeedinaynaa dowladda KMG Soomaaliya inay tixgeliso heshiisyadii Garoowe iyo dhammaan heshiiyadii kale, kuwaasoo si cad u qeexayay doorka haweenka ee ka qayb-qaadashada siyaasadda dalka isla markaana la dhawro saamiga loo qoondeeyay inay dumarku ku yeeshaan oo 30% ahayd.
2. Waxaan ugu baaqeynaa odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed inay tixgeliyaan saamiga haweenka ee ku aaddan ka qayb-qaadashada ergooyinka ansixinaya dastuurka iyo xubnaha baarlamaanka cusub.
3. Waxaan si gaar ah ugu baaqaynaa saxiixayaasha Roadmap-ka inay ilaaliyaan heshiisyadii Garoowe II iyo dhammaan kuwii kale, sidii ay ku saxiiseen khaasatan saamiga haweenka.
4. Waxaan sidoo kale baaq u diraynaa beesha caalamka kaasoo ah inay xaqiijiyaan hirgalinta heshiisyadii siyaasadeed ee lagu dhawrayay xuquuqda dumarka ee ku aaddan qayb-galka siyaasadda dalka.
Ugu dambeyn, haweenkii kulankaas isugu yimid ayaa waxay isku raaceen inay difaacdaan xuquudooda, waxayna muujiyeen inay diyaar u yihiin gudashada waajibaadka ka saaran dalkooda.